China Plastic imba yepurasitiki bhokisi yemagetsi Mugadziri uye Mutengesi | Mestech
Midziyo yemagetsi inofanirwa kunge iine yekunze epurasitiki bhokisi repurasitiki dzimba yekupa inodiwa nzvimbo, kugadzirisa uye kuchengetedza zvemukati zvikamu kubva kunze kwekukanganisa. Aya mabhokisi kana dzimba zvinowanzo kuumbwa nezvezvinhu zvepurasitiki. Tinovadaidzaepurasitiki bhokisi-epurasitiki dzimba dzemagetsi.
Zvigadzirwa zvemagetsi zvinowanzo fambiswa neakakwira magetsi magetsi, ayo anoshandiswa panze kana mune yakanyanya tembiricha uye mwando nharaunda kana pasi pekukanganisa mutoro. Naizvozvo, epurasitiki bhokisi-repurasitiki pekugara remagetsi rinofanirwa kuve rakasimba uye rakavimbika, uye izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa zvinofanirwa kuve nesimba rakaringana, kuomarara, kuputira uye kudzora murazvo, pamwe neepamusoro uye yakaderera tembiricha kuita.
Chii chinonzi michina yemagetsi muhupenyu, kunyanya kushandiswa kwemagetsi, magetsi mune mamwe marudzi esimba rekushandisa, chinangwa chikuru ndechekusimudzira hupenyu hwehupenyu. Semuenzaniso: maacircon, michina yekuwachisa, zvinodziisa mvura, vanobika mupunga, michina yemwenje nezvimwe zvakadaro.
izvo maficha emidziyo yemagetsi
Mukutsanangurwa kwakamanikana, zvishandiso zvemagetsi zvine mazwi akakura emashandisirwo emagetsi uye saizi yechigadzirwa zvigadzirwa zvemagetsi zvemagetsi. Midziyo yemumba nemidziyo yemuhofisi ndiwo marudzi maviri makuru emidziyo yemagetsi. Magetsi emagetsi emidziyo yemagetsi akakwirira. Naizvozvo, zvishandiso zvemagetsi munyika dzakasiyana siyana zvine zviyero zvepamusoro zvekuchengetedza zvinoshandiswa.
Midziyo yemagetsi inowanzo kuve nemagetsi emagetsi module, masystem ekudzora, mashandiro uye dzimba. Imba yemagetsi uye mashandiro acho epurasitiki nesimbi zvikamu.
Tsoka masaja muchina dzimba
Mhepo yekunatsa epurasitiki dzimba
Printer epurasitiki dzimba
Mhepo inogadzirisa dzimba
Maitiro ekugadzira bhokisi repurasitiki bhokisi repurasitiki redzimba zvemagetsi zvigadzirwa?
* Iwe unofanirwa kuve neruzivo neruzivo zvinotevera:
1. Ruzivo uye ruzivo mukugadzirwa kwemishini.
2. Nzwisisa kushandiswa kwechigadzirwa uye zviyero zveindasitiri.
3. Nzwisisa epurasitiki zvivakwa uye kugadzira tekinoroji, Hardware hunhu uye kugadzira tekinoroji.
4. Unyanzvi mukushandisa mapurani dhizaini dhizaini.
* Iwe unofanirwa kuve unoziva nharaunda uye zvinodiwa zverudzi urwu rwechigadzirwa.
1. Nzwisisa zvinhu zvekuita zvinodiwa:
Izvo ndezvemukati mekushandisa kana kunze?
Tembiricha yakakwira uye murazvo unodzora unodiwa here?
Pane here kuputira magetsi, anti-static zvinodiwa, kana basa renguva refu mune yakakwira voltage, yakaderera frequency, yepakati frequency kana yakakwira frequency nharaunda?
Izvo zvinodikanwa kuti zvishande mukukwirira kwepamusoro uye humhutu inorwisa-ngura nharaunda?
Zvinotarisirwa here kushanda munzvimbo yakadzika tembiricha pazasi pe zero?
Iwe unoda anti-ultraviolet radiation?
Pane here chero chinodikanwa chekumanikidza uye kukanganisa kuramba?
Pane here chinodiwa pakujekesa kana kupokana?
Iko kune chero zvinodiwa zvekuenderana nemavara, kubwinya kwepasi, zviyo, kupenda, kupenda uye kudhinda sirika?
2. Zvinodikanwa kuti zvisangane muchigadzirwa dhizaini yezvigadzirwa?
Kunyangwe zvikamu zvacho igobvu, zvinofamba zvikamu, rutsigiro rwemukati kana zvikamu zvekushongedza?
Iko kune kwakanyanya kunyatso kudikanwa kwehukuru uye chimiro chezvikamu?
Kunyangwe Zvikamu Zvitakura Zvinorema Kutakura?
Chikamu chikamu here kana chakasiyana zvinhu?
Pane pane chero zvinodikanwa zvekudonha, kuvhunduka uye kupokana mune chigadzirwa?
Iko kune chisimbiso uye isina mvura zvinodiwa kune zvigadzirwa?
Kufananidza hukama hwezvikamu muchigadzirwa
Kufambisa hukama pakati pezvigadzirwa nezvimwe zvigadzirwa
Maindasitiri uye ekuchengetedza zviyero zvinofanirwa kusangana nezvigadzirwa
Zvakadii nezvekugadzira maitiro epurasitiki bhokisi goko?
Ge zvikamu zvinogadzirwa nejekiseni kuumbwa. Inosanganisira zvinhu zviviri
1. Jekiseni muforoma kugadzira
Hukuru uye kutaurwa kwemarudzi ese emidziyo yemagetsi zvakasiyana zvakanyanya, uye chimiro cheforoma neforoma chakasiyanawo.
A. Kune mahombekombe mahombe, kuitira kufambisa jekiseni kuzadza uye kuwana kunaka kwechitarisiko, ukobvu hwemadziro hwakagadzirwa zvakaenzana uye zvigadzirwa zvine hunyoro hwakanaka zvinoshandiswa. Masuwo mahombe akananga anowanzo shandiswa muzvimiro zveforoma. Kune B. zvikamu zvine yakakwira fluidity, yakatetepa, gobvu, yakatetepa kana yakashata, mumhanyi anopisa akagadzirwa pane kufa. Kuti ugadzirise mamiriro ejekiseni, chengetedza nguva yekujova uye uwane mhando yakanaka.
C. Kune chaiwo zvikamu kana zvikamu zvine yakakwira yepamusoro mhando zvinodiwa, simbi ine yakagadzikana saizi uye ngura kuramba inofanirwa kusarudzwa seyakadzika. Yepamberi CNC, inononoka WEDM uye girazi EDM zvinoshandiswa kugadzira machisa.
D. Kune zvikamu zvine zvinowedzerwa zvakadai segirazi fiber uye murazvo unodzora, iyo mhango mhango inofanira kugadzirwa yakaoma zvinhu.
E. Zvezvinhu zvine shrinkage senge nylon, POM uye PP, saizi yemukati inofanirwa kuve yakagadzirirwa nenzira kwayo zvichienderana nekudzikira.
F. Kusarudzwa kunonzwisisika kwenzvimbo dzekuzadza. Kufa kwemukati mhino kunofanirwa kuve kunonzwisisika uye kwakaringana
2. Zvidziviriro zvezvikamu zvejekiseni jekiseni
A: dhiramu yeiyo jekiseni kuumbwa muchina inofanira kuchengetwa yakachena. Kunyanya yezvikamu zvine yakakwira yepamusoro mhando zvinodiwa, kunze kwekusanganisa kupi, kusachena uye neruva rezvinhu.
B. Kunyanya kutariswa kunofanirwa kubhadharwa kujekiseni kuumbwa kwehombodo hombe
C. Kune zvikamu zvine zvidhori zvinodiwa, kushanduka kwezvikamu kunofanirwa kudzivirirwa, uye hombe yakawanda kana inonamira glue inofanirwa kudzivirirwa kuchenesa nzvimbo yekuisa chisimbiso.
D. Kune batch yekumberi kumagumo, makona akapinza, mabhuru uye kutsemuka pamusoro pezvikamu zvinoshanda pasi pekumanikidza kukuru.
Imhandoi yepurasitiki yezvinhu inoshandiswa kune epurasitiki danda remidziyo yemagetsi?
Mapurasitiki anotevera anowanzo shandiswa mukugadzira epurasitiki yakavharirwa emidziyo yemagetsi:
1. ABS, ABS / PC: idzi mbiri mhando dzinowanzo shandiswa kugadzira matemhe kana zvivharo zvine huso hwakanaka.
2. PMMA, PC: zvinhu zviviri izvi zvinonyanya kushandiswa kune yakajeka pani uye mwenje
3. Nylon, POM: anoshandiswa kugadzira zvikamu zvekufambisa mashandiro, senge magiya, magiya ehonye, ​​shafti dzinotenderera, makwande uye ma roller kana mavhiri.
4. TPU, TPU: iwo marudzi maviri ezvinyoro resini, ayo anowanzo shandiswa kugadzira mabhatani kana zvikamu zvisina mvura nekuzvibatanidza neABS kana PC kuburikidza nekaviri jekiseni kuumbwa.
Pashure: Plastic zvokurapa bhokisi jekiseni Kuumbwa
Zvadaro: Mapurasitiki ekushandisa mabhokisi
Double-jekiseni isapinda mapurasitiki nyaya Int ...